१८ बैशाख २०७७, बिहीबार ००:०४
कसैलाई केको धन्दा कसैलाई केको धन्दा, अल्छे सरकारलाई घरिघरि लकडाउन लाउनको धन्दा । फेरि लायो ! त्यो पनि सातादिन होइन, द–दश दिन ! अल्छे सरकारका दृष्टिमा हर रोगका एक दबा, लायो लकडाउन झ्याम ! लकडाउन कोरोना भाइरस नियन्त्रणको एकमात्र, नित्य र निर्विकल्प.....
१४ बैशाख २०७७, आईतवार १४:४३
झन्डै ७० वर्षको प्रयासपछि नेपालमा कम्युनिस्टले संसद्मा सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार गठन गरेका छन् । न्यायपालिकाबाहेक राष्ट्रपतिलगायत राज्यका मुख्य सबै पदमा नेकपाका प्रतिनिधि निर्वाचित छन् । एउटाबाहेक सबै प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय.....
६ बैशाख २०७७, शनिबार ०५:३१
अहिले प्रत्येक मानिसको मुखमुखमा कोरोना शब्द झुण्डिएर रहेको छ । त्यसैले कोरोना के हो ? भन्ने प्रश्न गर्दा यस्तो पनि प्रश्न हुन्छ भन्ने कसैलाई लाग्दो हो । त्यसैले यहाँ यो प्रश्न गरिनुको आशय कसैलाई कोरोनाबारे सुनेको छ छैन भनी सोधेको होइन । सबैलाई अहिले.....